ProofHQ: Fanaporofoana an-tserasera sy fiasa mandeha ho azy | Martech Zone
ProofHQ dia rindrambaiko manaporofo an-tserasera an-tserasera SaaS izay mandrindra ny fijerena sy ny fankatoavana ny atiny sy ny fananana famoronana mba hahavitana haingana kokoa ireo tetikasa ara-barotra ary tsy misy ezaka firy. Manolo ny fizotran'ny mailaka sy ny kopia sarotra izy io, manome fitaovana ho an'ny ekipa mpandinika hijerena miaraka ny atiny famoronana, ary fitaovana ho an'ny mpitantana ny tetikasa marketing hanarahana ny famerenana. ProofHQ dia azo ampiasaina amin'ny haino aman-jery rehetra, anisan'izany ny pirinty, nomerika ary audio / visual.
Matetika, ny fananana famoronana dia dinihina sy ankatoavina amin'ny alàlan'ny mailaka, porofo tsy voadika amin'ny kopia, fizarana amin'ny efijery ary dingana maromaro tsy dia mahomby. ProofHQ mamaha ity olana ity amin'ny fanomezana vahaolana mifototra amin'ny rahona ho an'ireo ekipa mpivarotra mba tsy handinika fotsiny, hanitsy ary hiara-hiasa amin'ny fananana famoronana fa mba hanana ny olona sy ekipa marina hanaiky ny fananana tsirairay alohan'ny hidirany amin'ny dingana manaraka, izay no tsy manam-paharoa an'ny ProofHQ automated workflow no.
Fitantanana ny workflow: Ny famerenana amin'ny laoniny sy ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanamafisana ho azy ho an'ny fanananao famoronana dia zava-dehibe amin'ny fiantohana ireo tetik'asa ara-barotra sy fanaterana hafa vita ara-potoana. Na maso ivoho ianao izay manana zotram-piasa samihafa ho an'ny mpanjifa tsirairay na marika mifanena amin'ny olan'ny fitohanana anatiny sy ny fanarahan-dalàna dia handany fotoana foana ianao amin'izay ilaina izany raha tsy misy iray. Miaraka amin'ny workflow mandeha ho azy, ny talen'ny famoronana, ny mpitantana ny tetikasa na ny mpivarotra mitantana ekipa dia afaka mametraka asa famerenana miverimberina sy fankatoavana amin'ny autopilot, ahafahanao mifantoka amin'ny fanaovana izay tsara indrindra vitanao: mamokatra kokoa ary mamorona bebe kokoa.
Endri-javatra lehibe an'ny ProofHQ
Dinika mora sy fankatoavana
Fotoam-pivarotana fanamarihana tena izy sy fitaovana fanamarihana
Mamorona porofo avy amina karazana rakitra 150+
Fampidirana miaraka amin'ny tetik'asa Management Project sy DAM toa ny BaseCamp, Central Desktop, CtrlReviewHQ, Adobe Creative Suite, Microsoft Sharepoint, Xinet, Box, Widen ary Workfront
Avereno jerena ireo porofo amin'ny PC, MAC, smartphone na tablette
Ampitahao ny dikanteny maromaro
Mizara porofo haingana amin'ireo ekipa mpandinika nozaraina
Araho ny porofo manohitra ny fe-potoana
Fihetsiketsehana mandeha ho azy
Mandrindra fitantanana porofo
Lalana fanamarinana nohitsakitsahana fotoana
Tags: suite famoronana adobefahafahana misafidyfitaovan'ny masoivohofankatoavanaBasecampBoxDesktop afovoanyfiaraha-miasaCtrlReviewHQfamolavolanaMicrosoft Sharepointfanaporofoana an-tseraseraporofoproofhqfanaporofoanaekipahihamalalakaXinet
Tsy mahazo miteny gigs ianao noho ny fanatrehanao an-tserasera
Jun 24, 2013 ao amin'ny 7: 04 PM
ProofHQ dia fanombohana tsara, fa ho an'ny mpanjifa be pitsiny kokoa dia jereo ny Viki Solutions. Miaraka amin'ny zoom lalina 2400%, ny fahamarinan'ny loko, ny fampitahana fanavaozana, ny endri-pamokarana manokana, ary ny teknolojia ho an'ny famindrana rakitra haingana sy azo antoka ary fizarana maneran-tany, Viki Solutions dia manome fahafaham-po ny filan'ny masoivohom-pitantanana marika lehibe manerana izao tontolo izao. Faly izahay ho anisan'ny lahatsoratra ho anao koa! Fantatro fa lahatsoratra momba ny orinasa ity, saingy miezaka manampy ny mpamaky anao hahita izay tadiaviny aho.
Jul 6, 2013 amin'ny 5: 15 AM
Mampiasa Proofhub (www.proofhub.com) izahay ary nahita ny fitaovana porofo miampy ny maodelin'ny tetikasa sy ny lisitry ny asa tsara kokoa noho ny proofhq an'ny basecamp. Ny ekipa mpamorona dia tena mandray andraikitra ary mihaino ny mpanjifany, tombony lehibe ho anay izany.
Jan 23, 2014 ao amin'ny 8: 09 AM
ProofHQ dia safidy tsara fa tiako kokoa ny ProofHub satria tena mahery sy tsotra ary manana endri-javatra maro kokoa.